ICANDELO LESITSIMBI SETABLE BASE Factory | I-China I-CAST IRON TABLE BASE BASE Abavelisi kunye nabaxhasi
Isiseko setafile iTB129
Iziseko zeetafile zale ngqokelela zenziwe nge-polished, egcwalisa ngokupheleleyo, e-anti-rust, yentsimbi yokugaya isinyithi, le ngqokelela yesiseko yenzelwe ukomelela okugqwesileyo okuqinileyo, kusebenza nangasiphi na isitayile setafile ephezulu, kwaye kulula kakhulu ukudibana kunye nokuqhotyoshelweyo. izixhobo ezifana nezikrufu.
Kwaye, enkosi kulwakhiwo lwayo olucekeceke kunye nokugqitywa komnyama omnyama, unokuqiniseka ukuba esi siseko siza kulunceda ngokugqibeleleyo naluphi na uhombiso. I-Glides ifakiwe ukukhusela imigangatho yakho kunye nokulungelelanisa indawo engalinganiyo.
I-TB131EXT Isiseko setafile yesikwere
Ubunzima bomzimba: 27.0 KGS Gross Gross: 29.0 KGS Base Plate Width: 29.53 ″ x15.75, Specification MM: 750 * 400 * 720 Packing: One Set Three Carton Packaging Volumn: 0.04536 Recommended Top Size MM: 1200 × 800
Isiseko setafile seTB131
Ubunzima bomzimba: 19.3 KGS Gross Gross: 20.8 KGS Base Plate Width: 15.75 ″ x23.62, Specification MM: 400 * 600 * 720 Packing: One Set Two Cartons Packaging Volumn: 0.0312 Recommended Top Size MM: 1000X700
I-TB101-17P Isiseko setafile esijikelezileyo
Ubunzima bomzimba: 11.3 KGS Gross Gross: 12.8 KGS Base Plate Width: 15.75, Specification MM: 400 * 720 Packing: One Set Two Cartons Packaging Volumn: 0.0235 Recommended Top Size MM: 600 × 700
Isiseko setafile yeTB120
Izinto ezisisiseko esisezantsi: intsimbi yentsimbi
Izinto zeTyhubhu: intsimbi
Izinto zesigcawu: intsimbi yentsimbi
Gqibezela: umgubo wawutyabeka
Uhlobo lweSiseko: Namhlanje
Umbala: Mat Black (ulwenziwo ezikhoyo)
Ukusetyenziswa: Ngaphandle nangaphandle
Ukuphakama kwesiseko: 28.34 "
Ubunzima obuphezulu beTafile ehambelana nayo: 160 KGS
Inkcazo: Isiseko setafile seHolland Bar Stool ngokuqinisekileyo sinokuncoma nawuphi na umhlobiso. Isiseko sesikwere sigqityiwe ngengubo ehlala ihleli, ehlala ixesha elide, umgubo. Iinyawo zentsimbi yentsimbi kunye nekholamu yentsimbi zibonelela ngozinzo oluphezulu. Isiseko setheyibhile sinokuhlalisa iintlobo ezahlukeneyo zobukhulu obahlukeneyo kwaye size kumgangatho oqhelekileyo wokulinganisa. Isiseko ngumgangatho wentengiso kwaye siya kulunga kuzo zombini izicelo zokuhlala kunye nezokuhamba.
Isiseko setafile yeTB121
Isiseko setafile iTB122
Isiseko setafile iTB117
Inkcazo: Esi sikwere setafile yesinyithi siqinisekile ukuba siza kusebenza nakweyiphi na indawo esendlwini. Isiseko sinokusebenza ngeendlela ezahlukeneyo ezahlukeneyo. Ngelixa ikumgangatho wentengiso, iya kulunga kuzo zombini iindawo zokuhlala kunye nezentengiso.
I-TB118 Isiseko setafile
Isiseko setafile ze-TB119
I-TB113-17 I-Iron Round Round Isiseko seTafile
Inkcazo: Isiseko setafile yentsimbi esijikelezileyo siqinisekile ukuba siza kusebenza nakweyiphi na imeko yangaphakathi. Isiseko sinokusebenza ngeendlela ezahlukeneyo ezahlukeneyo. Ngelixa ikumgangatho wentengiso, iya kulunga kuzo zombini iindawo zokuhlala kunye nezentengiso.
I-TB113-22 Cast Iron Round Itheyibhile yeSiseko